🥇 အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော Forex အကောင့်များ | ဇွန်လ 2022 လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ - ကုန်သွယ်မှု2ခုကို လေ့လာပါ။
လေ့လာပါ ၂။ ကုန်သွယ်ရေး FOREX MAM ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှင်းပြထားပါသည်
အကယ်၍ သင်သည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုစိတ် ၀ င်စားသော်လည်း၎င်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အလုပ်ပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူလျှင် - စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အတိုင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့မဟုတ်ပါက MAM အကောင့်တစ်ခုဟုရည်ညွှန်းလျှင်၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲငွေကြေးအတွဲများဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာဗဟုသုတကုန်သည်များ ၀ င်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်မလိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။
ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex အကောင့်များနှင့်ပိုမိုတိကျစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အရာများကိုလေ့လာနိုင်သည်။ Learn2Trade MAM ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်အောင်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း!
AvaTrade - ယုံကြည်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်ကုန်သွယ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရ AvaTradeGO အက်ပလီကေးရှင်း
24/7 cryptocurrency ကုန်သွယ်
တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (၆) ခုကိုဖြတ်ပြီးစည်းမျဉ်း
MAM သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်း (Multi Account Manager)
2 ကုန်သွယ်မှု MAM ရှင်းလင်းချက်လေ့လာပါ
အနည်းဆုံး MAM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Managed Forex Accounts သည်မည်သို့လည်ပတ်သနည်း။
အွန်လိုင်းပွဲစားမှတစ်ဆင့် Forex အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်
စီမံခန့်ခွဲ Forex အကောင့်: ဥပမာ
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်အမျိုးအစားများ
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex Accounts: အပြုသဘော
မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အတွက် passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
၂၀၂၁ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် Forex Accounts
Forex အကောင့်ကိုစီမံခြင်း - အန္တရာယ်များ
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်တစ်ခုအတွက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း
Min Investment လိုအပ်ပါသည်
T & C ထုတ်ယူခြင်း
Learn2Trade Forex MAM ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Learn2Trade MAM ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်နှစ်မည်မျှရှိသနည်း။
အနည်းဆုံး MAM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Learn2Trade MAM သည်မည်သည့် Forex အတွဲများကိုပစ်မှတ်ထားသနည်း။
Learn2Trade MAM သည်မည်သည့်ပွဲစားကိုမှတ်ပုံတင်ထားသလဲ။
Join MAM သို့အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်
ဤ link ကို သုံး၍ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း: https://www.avatrade.com/visit/avatrade-mam
သင့်တွင် Avatrade နှင့် MAM သို့ဆက်သွယ်ရန်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပါက၎င်းသည်သီးခြားအကောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်။ မိတ်ဖက်ကုဒ်နံပါတ် 110448 ကိုထည့်ပါ
ရွေးချယ်ပါ: Metatrader 4
ငွေကြေး - အမေရိကန်ဒေါ်လာ
သင်၏ ID နှင့် utility Bill ကိုတင်ပါ။ ဖြည့်ပါကတ်ပြားဖြည့်ပါ။
ဘယ်ဘက်တွင် Avatrade ရှိ dashboard တွင်စာရွက်စာတမ်းများ upload လုပ်ရန် tab တစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းကြားပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] အထက်ပါအချက်များသည်သင်နှင့်ပြီးစီးခဲ့သည်
Metatrader4အကောင့်နံပါတ်နှင့်အကောင့်ရှိသင်၏သုံးစွဲသူအမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင်၏ Avatrade အကောင့်အပြည့်အစုံအတည်ပြုပြီးမှသာအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ MAM အကောင့်သို့ဆက်သွယ်ပါ
Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့ယခုတွင်အပြည့်အဝလည်ပတ်သော MAM ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်ဟုကြေငြာခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီဟာကငါတို့အိမ်တွင်း Forex ကုန်သည်တွေကို ၁၀၀% passive သဘောသဘာဝကိုအပြည့်အဝအကျိုးရှိစေတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ AvaTrade မှတစ်ဆင့် Learn2Trade MAM ၀ န်ဆောင်မှုသို့အရင်းအနှီးထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်လက်ဗွေကိုမြှောက်စရာမလိုဘဲကုန်သွယ်မှု Forex ကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောမည်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမဆိုသင်၏အကောင့်တွင်သွယ်ဝိုက်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္sectionsများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex MAM အကောင့်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရှိနိုင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ဘဏ္financialာရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကောင့် # 1
အကောင့် # 2
အကောင့် # 3
ပထမဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံး - ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည် Forex market သို့မည်သို့ချဉ်းကပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းပြရန်ခွင့်ပြုပါ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည်၎င်းတို့အကြားဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိကြသည် - ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုအခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့အဖွဲ့တိကျတဲ့ Forex အားလုံးအတွက် scan နှင့်သုတေသနမှကုန်သွယ်နေ့၌တစ်လျှောက်လုံးအဓိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအမျိုးမျိုးဖြန့်ချထားပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင် RSI၊ Moving Averages နှင့် Bollinger Bands မှ Aroon Oscillator၊ MACD နှင့် On-Balance-Volume အထိပါဝင်သည်။
မဟာဗျူဟာအရ - ကုန်သည်များသည်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးရာထူးများကိုအဓိကထားကြသည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဈေးကွက်ထဲ ၀ င်ရန်ထွက်သွားရန်ဖြစ်သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုကိုမြင်တွေ့ရပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည် ဦး ရေပြားနည်းဗျူဟာများကိုကောင်းစွာတတ်မြောက်ထားပါသည်။ စုံတွဲတစ်တွဲသည်ပေါင်းစည်းခြင်းကာလ၌စွဲကပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသိမြင်သောအခါဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည် - ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းပြောင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်နည်းသောရာထူးများသို့ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။
Learn2Trade MAM အကောင့်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် - 'MAM သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်း (Multi Account Manager)' အပေါ်ရှိအပိုင်းကိုတက်ကြည့်ပါ။
AvaTrade မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MAM ၀ န်ဆောင်မှုမှအကျိုးခံစားရန်အလို့ငှာအနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကျော်နေသည်ဟုသင်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။
သင်၏မြို့တော် AvaTrade တွင်လုံခြုံမှုရှိကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာဤထိပ်တန်းအရစ်ကျပြုသည့်နေရာကိုတရားစီရင်မှုခြောက်ခုဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် AvaTrade သည်ဖောက်သည်များအားကာကွယ်ခြင်း၊ ငွေခဝါချခြင်းနှင့်ဘဏ်အကောင့်များနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ -
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex MAM ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အမြတ်ခွဲဝေမှုစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များအဖွဲ့သည်တတ်နိုင်သလောက်ငွေရှာရုံသာမကစွန့်စားမှုနည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုသေချာစေသည်။
အမြတ်အစုရှယ်ယာ ၇၀/၃၀ စနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမြတ် ၇၀% ကိုသင်ကသိမ်းဆည်းပြီးကျန် ၃၀% ကို Learn 70 Trade မှကော်မရှင်အဖြစ်ကောက်ခံသည်။
Learn 5,000 Trade MAM ၀ န်ဆောင်မှုသို့သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဟုဆိုပါစို့
လတစ်လကုန်မှာငါတို့ကုန်သည်တွေက ၅% ပြန်အမြတ်ရတယ်။
အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ မှာ - ဒါကတစ်လကုန်အမြတ်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြစ်လာတယ်
ဤကိန်းဂဏန်းတွင်သင်ဒေါ်လာ ၁၇၅ ကိုသင်သိမ်းထားလိမ့်မည်၊ လေ့လာမှု ၂ ကုန်သွယ်ရေးမှကော်မရှင်သည်ဒေါ်လာ ၇၅ ကျသင့်လိမ့်မည်
ထို့ကြောင့်သင်၏လကုန်ချိန်သည်ဒေါ်လာ ၅,၁၇၅ ဖြစ်သည်
Forex MAM ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေကိုလည်း ၂% ပေးသည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ငွေပမာဏအပေါ်အခြေခံသည်။
Mam သည် Multi-Account Manager ကိုဆိုလိုသည်။ နာမည်ကအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်း Mam အကောင့်တစ်ခုသည်သင့်အားအကောင့်ပေါင်းများစွာကိုကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုရန်ကူညီသည်။
'Lot Allocation Management Module' အတိုကောက်ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင့်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ လည်ပတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Pamm (အောက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည်) ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်သည်။
နွားစားခွက်သည်ငွေကြေးများစွာဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း၊ သုံးစွဲသူအကောင့်အားလုံးသည်ပုံမှန်ငွေဖြင့်တိုးချဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အရင်းအနှီးအမြောက်အမြားနှင့်ကုန်သွယ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဟုမှတ်ယူကြသည်။
'ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုစီမံခန့်ခွဲမှု Module' ကိုကိုယ်စားပြုသောဤစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အခြားနှစ်ခုနှင့်မတူပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Pamms နဲ့မင်းရဲ့အဓိကအရင်းအနှီးရာခိုင်နှုန်းကိုသင်အဓိကအကောင့်ကနေကူးယူနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့မြို့တော်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုရည်ညွှန်းနိုင်တယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်မျိုးကိုအသုံးပြုနေသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ကုန်သွယ်မှုစနစ်တစ်ခုစီ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုကွဲပြားခြားနားစွာသတ်မှတ်နိုင်ရန်သင်၏ငွေအရင်းအနှီးကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်အကောင့်မျိုးစုံကိုသုံးနိုင်သည်။
ငွေကြေးမန်နေဂျာများသည်များစွာသောရွေးချယ်စရာများကြောင့်ဤစနစ်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ကုန်သည်များအနေဖြင့်ကုန်သွယ်ချိန်ကာလ၊ ကော်မရှင်ပမာဏနှင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်အချိန်ကိုသူတို့သဘောကျနိုင်သည့်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေများကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Pamm ရွေးချယ်မှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အကြောင်းမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်မန်နေဂျာအမြောက်အများရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Pamm ကသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ်အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်မှုပေးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုရှင်သန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစာရင်းတွင်ကုန်သည်များကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကုန်သည်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေသောအခါ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ Forex အကောင့်များကိုလူကြိုက်များသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာမွေးရာပါစွန့်စားရမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိခြင်းနှင့်နိမ့်ကျသည်ဟုယူဆခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်မှတစ်ဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိမိသည်နှင့်အမျှစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex Account များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ စျေးကွက်သည်အီလက်ထရောနစ်လား၊ စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex Account များသည်များသောအားဖြင့်အဆုံးတွင်အမြတ်ရရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာလေ့ရှိသည်။
လူအများစုက Forex တွင်ငွေထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းမှာအမြတ်ရရန်ဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သောမှန်ကန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်သည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်သည်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှကျူးလွန်ခြင်းမပြုမီစူပါသတိထားဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ထို့ကြောင့် Forex Account မ်ားကိုအမြတ်အစွန်းများစွာရစေသောအခွင့်အလမ်းဟုသတ်မှတ်ကြသည်။
$ 5k သာလျှင်လစဉ် ၂၀% အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ အမြတ်အစွန်းများများပိုရချင်ရင်၊ အချို့သောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကအမြတ်အစွန်းသည် ၆၅% - ၁၀၀% သင့်အမြတ်အစွန်း၏မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းရရှိသည်ဟုတင်ပြကြသည်
အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပလက်ဖောင်းများသည်ဖောက်သည်များအားရလဒ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်သည်တစ် ဦး ၏ရလဒ်များကိုသင်အတည်ပြုနိုင်သည်။ သတိရဖို့အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုမှာပလက်ဖောင်းသည်၎င်း၏ရလဒ်များကိုတရားဝင်ဖော်ပြရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်မြင်ကွင်းအသစ်နှင့်အသစ်ဖြစ်နေလျှင် Forex ကိုစတင်ရောင်းဝယ်ရန်မသင့်လျော်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်တွင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဆုံးရှုံးစေသည့်အတွေ့အကြုံကသင်မစွန့်စားလိုပါ။
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာယခင်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်သင်ငွေကြေးရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည်အတွေ့အကြုံ Forex ကုန်သည်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များသည်ဤမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နည်းလမ်းမရှိခြင်းသည် Forex ကုန်သည်အသစ်များအတွက်သာမကကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုစီမံရန်အချိန်မရှိသောသူများအတွက်ပါဆွဲဆောင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး Forex သည်အချိန်နှင့်အပ်နှံမှုများစွာလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ စီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များ၏အလှအပသည်သင်၏ဘ ၀ နှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်များနေလျှင်ပင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုကျွမ်းကျင်သူကစီမံခန့်ခွဲနေကြောင်းသိသောကြောင့်လုံခြုံမှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Forex အရောင်းအဝယ်တွင် DIY အခြေခံကျမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်မှတဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင့်အားဤမျှမတူကွဲပြားသောအမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာမကအသိပညာနှင့်ပါရရှိနိုင်သည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် Forex ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်မလိုပါ။
အကောင်းဆုံးပွဲစားများနှင့်ကုန်သည်များသည်လိုက်နာရမည့်စွန့်စားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းလမ်းညွှန်များကိုရရှိပြီး drop-down ကန့်သတ်ချက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအပေါ်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအားလုံး၏ ၂-၃% ထက်မပိုရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။
သင့်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ရှိပါကကုန်သည်မှရရှိသောစွန့်စားမှုများသည်များစွာနိမ့်ကျနိုင်သည်။ သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှု Forex အကောင့်ကို ၂၀% ကျဆင်းမှုကန့်သတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်စတင်လျှင်၎င်းသည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဟာတောင်မှကိုင်တွယ်ရန်အလွန်အကျွံဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထိုအရာများနှင့်အတူ 'balance balance' ကိုပေးသော Forex account provider များနှင့်ကပ်ပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား Forex trading account များသည်၎င်းတို့၏အကောင့်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုအပေးအယူလုပ်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆကြသည်။ လူအများကဤအချက်ကိုယုံကြည်ကြခြင်းမှာအကောင့်ရောင်းဝယ်နေသည့်ငွေကြေးမန်နေဂျာသည်ထိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာသင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေများပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်သင်၏ငွေစာရင်းမန်နေဂျာကိုသာသင်၏ငွေစာရင်းကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ငွေမန်နေဂျာကိုလည်းသင်၏အကောင့်မှရန်ပုံငွေများထုတ်ယူခွင့်မရှိပါ။
သင်မပျော်ပါကသင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်သင့်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် Forex account ဖြင့်စီမံထားသည့်အထွေထွေအယူအဆမှာ၎င်းကိုရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဟုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုလည်ပတ်မှုယန္တရားများကိုအသုံးပြုသောအနာဂတ်နှင့်စတော့စျေးကွက်များနှင့်မတူဘဲ Forex သည်ခြယ်လှယ်မှုနှင့်ကင်းလွတ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Forex သည်စျေးကွက်တစ်ခုတည်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဟုဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဈေးကွက်၏အရည်အချင်းမြင့်မားမှုကြောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု Forex အကောင့်များကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုကြသည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များဖြင့်သင့်တော်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သလိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းခြင်းနှင့်မတူပါ။ အမြတ်အစွန်းကိုရရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုမရောက်မချင်းသင်၏ရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်မစောင့်ရပါ။
အကယ်၍ စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များအကြောင်းပြောခြင်းကသင့်ကိုအမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံး ၀ င်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးလျှင် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါ 2021 ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းများကိုစာရင်းပြုစုထားပြီဖြစ်သည်။
အာမခံချက်မရှိပါကအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်သင်၏လေလံပြုလုပ်ရန်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး အပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်စျေးကွက်တွင်ရက်သတ္တပတ်တစ်လ၊
သင့်ကိုနောက်ကွယ်မှအတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သည်တစ် ဦး ထားရှိခြင်းသည်အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေအကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်သင့်အားကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ရှိနေစေသည်။ ပြီးတော့သင်လုပ်နိုင်တာကကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာလိုအန္တရာယ်များကိုလက်တွေ့ကျအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
စျေးကွက်ဝေဖန်သုံးသပ်သူများကအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာလက်တစ်ဆုပ်စာကူးယူသောကုန်သည်များကို eToro platform ပေါ်တွင်ကူးယူရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကုန်သွယ်မှုကိုဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြင့်ကူးယူနိုင်သောကြောင့်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် အကယ်၍ မင်းကိုလိုချင်ပါကသင်သည် $ 200k နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည် (၁၀) ဦး ၏ supergroup ကိုအိတ်ထဲထည့်နိုင်သည်။
သင်၏ဥများအားလုံးကိုခြင်းတောင်းထဲမထည့်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကုန်သွယ်သူတစ် ဦး တည်းနှင့်ကူးယူသကဲ့သို့မကောင်းသောကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခု၏ဆိုးကျိုးများကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များများစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Forex အကောင့်ပလက်ဖောင်းကိုသင်ရှာဖွေသောအခါစိတ်စွဲမှတ်ထားရမည့်အချို့သောအချက်များမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်ဖွင့်ချင်သော Forex Account အမျိုးအစားကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုမတူကွဲပြားခြင်းအပေါ်တည်ဆောက်နေစဉ်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထားရှိလိုပါကသင်အလိုရှိသည်ဆိုလျှင် eToro ကဲ့သို့သော platform တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အကြွေစေ့၏ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်အစမှအဆုံးအထိအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုလိုချင်လျှင် FX Mac သည်သင့်အတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကုန်သည်များကို VET သင်စရာမလိုပါ။ အဲဒီအစား၊ သူတို့ကသင့်အတွက်လုပ်ပေးပြီးအဲဒီကတည်းကအရာအားလုံးကိုဂရုစိုက်ပါ။
ဖော်ပြထားသောပြန်လည်ပေးပို့မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင့်အားပေးအပ်ထားသောအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ ကုန်သည်တစ်ယောက်ကသူတို့ကိန်းဂဏန်း ၃ ခုကနေ ၄ ခုအထိအမြတ်ပြန်ရမယ်လို့ပြောရင်ဒါဟာမှန်တယ်လို့မဆိုလိုဘူး။
အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါမှသာပလက်ဖောင်းအတွက်ခံစားချက်ခံစားနိုင်မှာပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ အမြဲတမ်းလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်အမြဲရွေးချယ်သင့်သည်။ ထိုယုံကြည်မှုကိုရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex account provider များမှအနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။ FX Pig ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများကသင့်အားဒေါ်လာ ၅၀၀ သာ ပေး၍ ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း Word Markets နိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေမှာဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နှင့်အထက်မြင့်မားသည်။
သင်၏စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်အတွက်ပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်သောအခါသယ်ဆောင်ရန်မသွားခင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင်မည်သို့ပေးဆပ်ရမည်ကိုစဉ်းစားပါ။
Forex အကောင့်ပလက်ဖောင်းအများစုသည် Mastercard နှင့် Visa ကဲ့သို့သောများသောအားဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကူညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ငွေများကိုချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးသင့်သည်။
eToro သည်သုံးစွဲသူများအတွက်အမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများရှိသည့်အတွက်လူသိများပြီး Skrill, Neteller နှင့် Paypal ကဲ့သို့ e-wallets များကိုပင်ထောက်ပံ့သည်။ E-ပိုက်ဆံအိတ်များသည်ရိုးရာနည်းလမ်းများထက်များသောအားဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များမှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါ eToro ကဲ့သို့သော platform များအပြင်သင်သည်ကော်မရှင်အခကြေးငွေများကိုပေးရလိမ့်မည်။ ကော်မရှင်ကြေးရာခိုင်နှုန်းအတော်အတန်ကွာခြားသည်။ ဤ ၀ င်ငွေရှယ်ယာသည် ၁၀% နှင့် ၅၀% ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရှိနိုင်သည်။
သို့သော်ကော်မရှင်နှုန်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကသင့်အားစျေးအသက်သာဆုံးကုန်သည်ကိုရွေးချယ်စေပါစေ။ အမှန်မှာ၊ ဘ ၀ ၌အချို့သောအရာများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဖိုးအခများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟိုတယ်များကိုကြယ်များက သတ်မှတ်၍ အကောင်းဆုံးသောနေရာများမှာအများဆုံးဖြစ်သည်။
ကတိမတည်မီစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်ပလက်ဖောင်း၏အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြေအနေများကိုစစ်ဆေးရမည်။
ငွေထုတ်ရန်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပြီးသင့်ထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုအမှန်တကယ်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ Forex အကောင့်ပေးသူတစ် ဦး ၌“ အနည်းဆုံးရွေးရန်ကာလ” ရှိကြောင်းသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလမကုန်မှီသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမထိနိုင်ပါ။
အားလုံးသောအချက်မှာစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex Account များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာအတွက်များစွာဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်များသော Forex စျေးကွက်များကို passive နည်းလမ်းဖြင့်ကုန်သွယ်လိုပါကအထူးသဖြင့်ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသော Forex ကုန်သည်ကိုသင့်ကိုယ်စား ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ကားချပ်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းအတွက်နာရီပေါင်းများစွာမလိုဘဲကြီးမားသောဘဏ္areာရေးနယ်ပယ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိသည်။
သင်ရွေးချယ်သောကုန်သည်သည်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်များရရှိမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားအောင်မြင်မှုရရန် ပို၍ ကောင်းသောအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex account provider ကိုသင်သေချာစွာစစ်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတွင်၎င်းတို့တွင်သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်များရှိစေရန်နှင့်သင့်လျော်သောအဖွဲ့များကအပြည့်အ ၀ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
Learn2Trade forex MAM ဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ယုံကြည်မှုနှင့်အတူ Avatrade ကုန်သွယ်ရေး join
အခမဲ့ VIP ရယူရန် $ 250 ငွေသွင်းပါ
တစ်နှစ်တာအတွက် Forex အချက်ပြ!
၇ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားရန်မလိုပါ။ သင်နောင်တမရပါ
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex Account များသည်သင့်အားကျွမ်းကျင်သော Forex ကုန်သည်မှတစ်ဆင့်ရန်ပုံငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်စေသည်။ ဤကုန်သည်သည်သင်အားဒေါ်လာများစွာထရီလီယံစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရုံသာမကသင်၏ကုန်သွယ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင့်အားစာရွက်စာတမ်းများစွာသိမ်းဆည်းထားရုံသာမကသုတေသနနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိုပါဖော်ပြရန်သာမက၊ အချိန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများစွာကိုလည်းပါသက်သာစေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex trading ကိုစတင်လေ့လာသူဖြစ်ပါက၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်ကိုရွေးချယ်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ကိုလေ့လာခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စာရင်းဇယားများနှင့်အသေးစိတ်စျေးနှုန်းဇယားများကိုနားလည်ရန်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်သည်သင့်အားလုံး ၀ လုပ်စရာမလိုဘဲ Forex trading လောကသို့အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ သင်အရောင်းအ ၀ ယ်များပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်အချိန်ကုန်ခြင်းများအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်၏ပွဲစားများကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုငွေဖြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုသင်စိုးရိမ်ရန်လိုအပ်သည်မှာမည်သည့်ကုန်သည်ကသင့်အတွက်သင့်အတွက်လေလံဆွဲရန်ရွေးချယ်မည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်သည်စင်စစ်ဖြတ်တောက်ရန်လိုသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်သင်ရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုရရှိမှာပါ။ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကုန်သည်နှင့်ကုန်သည်များကွဲပြားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ၁၀% မှ ၅၀% ကြားတွင်ရှိသည်။
ဒါကြောင့် Forex ကုန်သွယ်ရေးမှကြွလာသောအခါ, ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့ကိစ္စရပ်တစ်ခုအဖြစ်ကုန်သွယ် - အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်ရှိပါတယ်။ မည်သည့်အရာကမျှအန္တရာယ်ကင်းသည်။ ကော်မရှင်အခကြေးမြင့်မားသောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤသို့ဆိုလျှင်အတွေ့အကြုံနည်းသောကုန်သည်တစ် ဦး အတွက် ၁၀% ထက် ၄၀% ပေးဆပ်ခြင်းသည်သင့်အားအကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ပွဲစားပလက်ဖောင်းများအားစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်၊ ၎င်းတို့ရောင်းချခြင်းကိုယုံကြည်မှုရှိရန်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသော်လည်း၎င်းအချက်သည်၎င်းကိုထောက်ခံရန်ဤပလက်ဖောင်းများမှအထောက်အထားမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်သည်မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်သည်သာမကမည်သူမျှခဲယဉ်းသောဘောလုံးမရှိပါ။ အားလုံးကျွမ်းကျင်မှု, ဂုဏ်သတင်းနှင့်ရလဒ်များကိုရှာဖွေပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်တစ်နေ့တာလုံးဆားတစ်ခွက်နဲ့အောင်မြင်မှုကတိတွေယူပါ။
တိကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာမတူပါ။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်၊ အကောင့်တခုဖွင့်ဖို့ခြေလှမ်းတွေကဆင်တူတယ်။
ထိုကုန်သည်သည်သင့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ ်၍ ရောင်းမည်။
သင်စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်ဖြင့်စတင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာစီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်ကိုပွဲစားကုမ္ပဏီမှတဆင့်ဖွင့်ရန်၊ နောက်တစ်ခုမှာတတိယပါတီမှဖြစ်သည်။
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ Forex ပွဲစားများကသင့်အားစီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များကိုဝင်ခွင့်ပေးသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်မိတ္တူကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်။ ကူးယူကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူညီချက်သည်သင်သဘောကျနှစ်သက်သောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည့်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏အစုစုကိုတူတူကူးယူပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ဒီကုန်သည်ကပြုလုပ်တဲ့ ၀ ယ်ယူမှုနှင့်ရောင်း ၀ ယ်မှုများကိုသင်၏အစုရှယ်ယာတွင် (သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အညီ) ထင်ဟပ်ပြသလိမ့်မည်။ ဤအချက်ကိုသတိရပါ - သင်စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်ကိုရှာဖွေနေစဉ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရှိဆုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုသည်ကူးယူရောင်းဝယ်မှုဖြစ်သည်။
eToro ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အားမိတ္တူကူးသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏မက်ထရစ်တိုင်းကိုကြည့်နိုင်သည်။ ဤအချက် မှနေ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအာရုံစိုက်သည်နှင့်လစဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာသောအကျိုးအမြတ်နှင့်အထွေထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစတိုင်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလိမ့်မည်။
သင်စတင်နိုင်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်ရွေးချယ်သောပွဲစားနှင့်အတူစာရင်းဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်ရန်ပုံငွေအချို့ကိုထည့်သွင်းရန်၊ အိမ်စာအချို့လုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုသင်ကူးယူလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကဒီအချက်ကနေစတယ်။
အချို့လူများကအခြားကုန်သည်တစ် ဦး ၏အလုပ်ကိုကူးယူရန်စိတ်မဝင်စားကြပါ။ ဤကိစ္စတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သော Forex အကောင့်အမြဲရှိသည်။ ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရန်သင်အထူးစီမံထားသော Forex အကောင့်များကိုပေးထားသည့်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အနည်းဆုံးပမာဏကိုသင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အချို့သောပွဲစားပလက်ဖောင်းများကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်ပွဲစားသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဟုသူတို့ထင်သောကုန်သည်ကိုသာရွေးချယ်လိမ့်မည်။
အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည် AI (Artificial Intelligence) နှင့် 'machine learning' ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အချက်အလက်အမြောက်အများတွင်ပုံစံများကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုစေသည်။ တနည်းအားဖြင့်စက်သင်ယူမှုတစ်ခု algorithm ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုလူသားကုန်သည်တစ် ဦး ထက် Algo Trading Bot မှပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဤအချက်အားဖြင့်သင်သည် Forex အကောင့်များမည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ယခုအကောင့်အမျိုးအစားတွင်အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမည်သို့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနမူနာများသည်သီအိုရီဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှာစီမံခန့်ခွဲ Forex အကောင့်ကိုအသုံးပြု။ ကုန်သွယ်တဲ့အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဘယ်လိုသွားပုံ၏ကိုယ်စားလှယ်နေဆဲဖြစ်သည်။
01. သင်ကဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ကိုအထူးစီမံခန့်ခွဲထားသော forex account platform တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဆိုပါစို့
02. ယခုထိုပလက်ဖောင်းသည်သင့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတွင်လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသောအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး အားသင့်အားခွဲဝေချထားပေးလိုက်ပြီ။ မည်သည့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဆိုသင်၏ကော်မရှင်ကြေးမှာ ၁၅% ဖြစ်သည်။
03. ပထမလကုန်တွင်ကုန်သည်သည်အမြတ် ၂၀% ရရှိသည်။ သင်၏ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှအမြတ်အစွန်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ($ 20 x 20,000% = $ 4,000) နှင့်ညီမျှသည်။
04. ထို့နောက်၎င်းမှကုန်သည်သည်ယခင်ကသဘောတူခဲ့သော ၁၅% သောကော်မရှင်ကိုဒေါ်လာ ၆၀၀ (ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ x ၁၅% = ဒေါ်လာ ၆၀၀) ရရှိသည်။
05. ဤမြင်ကွင်းတွင်လ၏အမြတ်အစွန်းသည်ဒေါ်လာ ၃၄၀၀ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင့်အစုစုကိုယခု $ 3,400 တန်ဖိုးရှိသည်။
01. ဒုတိယလကုန်ခါနီးတွင်ကုန်သည်သည် ၁၅% အရှုံးပေါ်သည်ဟုဆိုပါစို့။
02. လတစ်လကုန်တွင်သင်၏အစုစုတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၂၃,၄၀၀ တန်ဖိုးရှိခြင်းကြောင့်သင့်တွင်အရှုံးဒေါ်လာ ၃,၅၁၀ ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
04. ဤအခြေအနေတွင်သင်၏အစုစုသည်ဒေါ်လာ ၁၉,၈၉၀ ကျသင့်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအစဉ်အမြဲဖြစ်နေတတ်တယ်၊ ဒီဥပမာကနေလတစ်လကိုတစ်လပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာရှိနေတာကကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထက်နည်းတဲ့အောင်မြင်မှုမှာကော်မရှင်ကြေးမသက်ရောက်နိုင်လို့ပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကျလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် Learn2Trade MAM အကောင့်က Forex ကို passive mode နဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ငါတို့အသင်းကုန်သည်တွေကိုသွယ်ဝိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်လို့ငါတို့အမြတ်အစွန်းတွေအားလုံးသင့်အကောင့်ထဲမှာထင်ဟပ်နေလို့ပဲ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အလုပ်များရန်မလိုပဲကြိုတင်ထိုင်။ ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကအခကြေးငွေမှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရှေ့ပြေးဖြစ်ကြသည်။ ပထမအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် MAM တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ငွေပမာဏအပေါ် အခြေခံ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေကို ၂% ပေးသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များသည်ဘဏ္gာရေးအကျိုးအမြတ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရရန်သေချာစေရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြတ်ခွဲဝေသည့်စနစ်ကိုလည်းလုပ်ဆောင်သည်။ ဒါဟာ ၇၀/၃၀ မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဆိုလိုတာကအမြတ်ရဲ့ ၇၀% ကိုမင်းကသိမ်းထားပြီ။
Learn2Trade MAM ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စတင်ရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ထက်များစွာလျော့နည်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည်ကုန်သွယ်နိုင်သောစျေးကွက်များသို့ရောက်သောအခါအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ကိစ္စရပ်အများစု၌ကျွန်ုပ်တို့သည် EUR / USD နှင့် GBP / USD စသည့်အဓိကအတွဲများကိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ ထိုအချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်အဓိကကျသောအခြေခံသတင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါထွန်းသစ်စငွေကြေးများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေမည်။
Learn2Trade MAM အကောင့်ကိုယုံကြည်ရသော forex ပွဲစား AvaTrade မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဤထိပ်တန်းအဆင့်ရှိပလက်ဖောင်းသည် Forex စျေးကွက်များစွာကိုကမ်းလှမ်းထားသည်၊ မည်သည့်ကော်မရှင်မဆိုအခကြေးငွေမယူရ၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများမှထိန်းချုပ်သည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားများကကမ်းလှမ်းထားသောစီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်များများစွာရှိသည်။ Mam, Pamm နှင့် Lamm စနစ်များအားလုံးသည်တူညီသောအသံဖြစ်သော်လည်းဤကုန်သွယ်ရေးစနစ်များအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနေသည်။
စီမံခန့်ခွဲထားသော Forex အကောင့်ကိုမဖွင့်မီသုတေသနအချို့ကိုအရင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ မှတ်သားရမည့်အရေးအကြီးဆုံးအချက်များမှာကုန်သွယ်မှုစနစ်တစ်ခုချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်မှုရှိမရှိသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတ ဦး တည်းအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်, အခြားအဘို့အလုပ်မလုပ်လိမ့်မယ်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါကသင့်အားငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (၃) ခုနှင့်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းနည်းရှင်းပြရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် - မတ်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁
Samantha သည်ယူကေအခြေစိုက်သုတေသနနှင့်စာရေးဆရာဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးဘဏ္financeာရေးအတွက်အထူးပြုသည်။ ၎င်းတွင်ရိုးရာရှယ်ယာများနှင့်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှသည် Forex နှင့် CFD ကုန်သွယ်မှုအထိအရာအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ Samantha သည်ဘဏ္-ာရေးအခြေခံအကြောင်းအရာများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရေးသားခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းဒိုမိန်းတွင်စာပေအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာသူမကရှုပ်ထွေးသောငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာသူများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်စွာရှင်းပြနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။